नेपालमा नयाँ कानुन : कारागार नबसेर पनि कैद भुक्तान गर्न सकिने ! - Everest Dainik - News from Nepal
नेपालमा नयाँ कानुन : कारागार नबसेर पनि कैद भुक्तान गर्न सकिने !
काठमाडौं, भदौ १९ । कारागारको सट्टा घरमा बसेर सजाय भुक्तान गर्न सकिने व्यवस्थासहितको फौजदारी कसुरसम्बन्धी कानुन संसद्बाट पारित भई प्रमाणीकरणको क्रममा छ । कानुनमा कैद सजाय पाएको व्यक्तिले सामुदायिक काम गरेर, पुनस्र्थापना केन्द्रमा बसेर वा सुधारगृहमा बसेर सजाय भुक्तान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
याे पनि पढ्नुस नयाँ कानुनमन्त्रीमा तीनजनाको चर्चा
याे पनि पढ्नुस स्थानीय तहमा न्यायिक अधिकारः कानुनविनाका 'न्यायाधीश'
याे पनि पढ्नुस एक सय ५० ऐन संशोधन हुँदै